Kuyinto imishini yemishini esetshenziswa ngokuqhubekayo ekukhiqizeni, i-auto fixed irula ukusika amapayipi wensimbi, ingenye yedivayisi yokusekela ebalulekile yomugqa wokukhiqiza wepayipi we-weld. Ingasika amapayipi ngesikhathi sokuma okungaguquki nokunyakaza, ingakwazi ukusika ipayipi eliyindilinga nepayipi elikhethekile.
Umkhiqizo wesitayela se-Cold Roll Owenza umshini
Umshini wenzelwe ukukhiqizwa kwepayipi lephrofayili elinobukhulu obungu-2.0mm-8.0mm kusuka ku-low carbon steel strip. Umkhiqizo ophelile uzoba wuphayiphu wephrofayili.
LW600 Cold Roll Owenza isigayo Machine
Ipayipi lephrofayela Umshini Wokwakha Umshini